हिट स्ट्रोक (लू लाग्ने) बाट सावधान रहनुहोस् | COVID-19 多言語情報ポータル
हामीले COVID-19 को संक्रमण विरूद्ध सावधानीहरू अपनाएको समयमा, यो ग्रीष्म ऋतुको समयमा हामी लू लाग्नेबाट सावधान रहौं।
हामीले नोभेल कोरोनाभाइरसमा “नयाँ सामान्य” मा बस्नको लागि समायोजन गर्नुपर्छ र बाहिर हिडिरहेको बेला मास्क लगाउनु अहिले सामान्य प्रचलन छ। हामीले संक्रमणको जोखिम कम गर्ने यस्तो उपायहरू अपनाइरहेको बेला, यो गर्मीमा लू लाग्ने विरूद्ध अतिरिक्त पूर्वोपायहरू अपनाउनु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँ, मास्क लगाइरहेको समयमा दैनिक कामहरूको अभ्यास गर्दा वा कामहरूमा जाँदा लिन सक्ने उपायहरू हामी परिचय गराउछौं।
COVID-19 र लू लाग्न रोक्ने निम्न5आधारभूत उपायहरू
1. ताप / तातो ठाउँहरूमा जान त्याग्नुहोस्
बाहिर हुँदा, सकेसम्म तातो ठाउँहरूबाट टाढा रहनुहोस् र छायाँ र उचित भेन्टिलेसन भएको ठाउँहरूमा हुने प्रयास गर्नुहोस्। तापक्रमहरू उच्च हुँदा र एकदमै महत्त्वपूर्ण गर्मीका कपडाहरू लगाउँदा गर्मी दिन र दिनको समयमा बाहिर जान छोड्ने। घरभित्र हुँदा, कुलरको स्विच अन गर्न र उचित तापक्रम राख्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। घरायसी कुलरको भेन्टिलेसन प्रकार्य अपर्याप्त हुन्छ त्यसैले कुलर खुला भएको बेला झ्यालहरू खोल्न वा भेन्टिलेसन फ्यान प्रयोग गर्न आवश्यक हुन सक्छ।
2. आवश्यक भएमा अनुहारको मास्क हटाउनुहोस्
तापक्रम र आर्द्रता स्तरहरू अत्याधिक उच्च हुँदा, शरीरमा दाग बनाउन सक्ने अनुहारको मास्क लगाउने। बाहिर हुँदा, तपाईं 2m को दूरी वा अन्यबाट धेरै दूरी राख्दा समय-समयमा आफ्नो अनुहारको मास्क हटाउनुहोस्।
गर्मी दिनमा मास्क लगाउनको लागि अपनाउनुपर्ने सावधानीका निम्न पोइन्टहरू छन्:
तापक्रम र आद्रर्ता एकदमै उच्च हुँदा आफ्नो स्वास्थ्यको स्याहार गर्नुहोस्।
बाहिर हुँदा, तपाईं अन्य व्यक्तिबाट 2m भन्दा बढीको दूरी राख्दा आफ्नो मास्क समय-समयमा हटाउनुहोस्।
अत्याधिक अभ्यास गरे जस्तै शरीरलाई गाह्रो हुने क्रियाकलापहरू छोड्नुहोस्।
3. पानीले आफ्नो शरीर बारम्बार भरि राख्नुहोस्
धेरै पानी पिउनुहोस्। प्रत्येक दिन कम्तीमा 1.2 लिटर पानी पिउन सिफारिस गरिएको छ। तपाईंलाई तिर्खा लाग्नु अघि पनि पानी बारम्बार पिउनुहोस्।
साथसाथै, तपाईंलाई धेरै पसिना आउँदा, आफ्नो शरीरमा नुनले भर्ने निश्चित गर्नुहोस्।
4. आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गर्ने बानी सुनिश्चित हुनुहोस्
आफ्नो तापक्रम बारम्बार लिनुहोस् र आफ्नो शरीर स्वास्थ्य राख्न ध्यान दिनुहोस्। तपाईं राम्रो महसुस नगर्दा, उचित रूपमा आराम गर्नुहोस् र बाहिर पाइला राख्न आफैंले थकान महसुस नगर्नुहोस्।
5. हल्का अभ्यास व्यायाम गरेर सहनशीलता बनाउनुहोस्
समान समयमा हाइड्रेटेड राख्ने बेला तपाईंलाई अलि गर्मी भएको वा थोरै थाकेको अनुभव गर्ने विस्तारमा व्यायाम गर्न सिफारिस गरिएको छ। उमेर र स्वास्थ्य अवस्थामा निर्भर रहेर, प्रत्येक दिन लगभग 30 मिनेट व्यायाम गर्न राम्रो हुन्छ।
व्यायामका लागि सावधानी पोइन्टहरू
संक्रमण रोक्नका लागि आवश्यक उपायहरू अपनाउने बेला, तपाईंको शरीरलाई चलाउन र मानसिक तथा शारीरिक सन्तुलन कायम राख्नको लागि व्यायाम गर्न आवश्यक हुन्छ। माथि उल्लेख गरिएको आधारभूत उपायहरूको अतिरिक्त, हामी व्यायामका लागि अतिरिक्त सावधानी पोइन्टहरू परिचित गराउछौं।
व्यायाम सुरु गर्नु अघि स्वास्थ्य जाँच
तपाईंको अवस्था तलको कुनै निम्न कुराहरूमा मेल खान्छ भने, व्यायाम गर्न छोड्नुहोस्
तपाईंको सामान्य शरीरको तापक्रम भन्दा बढी हुन्छ भने
तपाईंलाई खोकी लाग्ने वा घाँटी दुख्ने जस्तो चिसोको लक्षण छ भने
तपाईंलाई कमजोरी वा श्वासको कमी छ भने
तपाईंले स्वाद वा गन्धको कमी हुने अनुभव गर्नुहुन्छ भने
तपाईंले गह्रौं महसुस गर्नुहुन्छ भने वा तपाईं सजिलैसँग थकान महसुस गर्नुहुन्छ भने
अनुहारमा लगाउने मास्कहरूको सम्बन्धमा
बाहिर हिँड्ने बेलामा, अनुहारमा मास्क लगाउन निश्चित रूपमा सिफारिस गरिएको छ। यद्यपि, तपाईंले मास्क लगाएर व्यायाम गर्नुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो हाइड्रेटेड राख्न असफल हुन सक्नुहुन्छ, तपाईंको शरीरको तापक्रम सजिलै कम हुँदै जान सक्छ र तपाईं लू लाग्नेबाट पीडित हुन सक्नुहुन्छ। तपाईं चलिरहेको बेला श्वास छोटो भएको महसुस गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो अनुहारको मास्क हटाउनुपर्छ र थोरै आराम गर्न निश्चित गर्नुहोस्। अनुहारमा मास्क लगाएर भन्दा नलगाएर व्यायाम गर्नाले शरीरमा सबैभन्दा बढी थकान भएको महसुस गर्नुपर्छ। स्वयंलाई थकान नदिइकन, दौडिरहेको बेला आफ्नो गतिलाई कम गर्ने र व्यायामको समग्र मात्रा कम गर्ने कदमहरू चाल्न सुनिश्चित गर्नुहोस्।
अभ्यासका विभिन्न पोइन्टहरूका लागि सावधानी पोइन्टहरू
हिँड्न र जगिङ गर्नको लागि, वरिपरि धेरै मानिसहरू नभएको स्थान र समय चयन गर्नुहोस् र तपाईं आफै वा थोरै मानिस हुँदा यो गर्नुहोस्। अरू मानिसहरूले बाटो पार गरिरहेको बेला, अन्य मानिसहरूबाट निश्वित दूरी कायम राख्न सुनिश्चित गर्नुहोस्।
तौल कम गर्न र योगा गर्नका लागि घरमा भिडियोहरू प्रयोग गर्नुहोस् र धेरै मानिसहरू उपस्थित नभएको स्थानमा यो गर्नुहोस्। कोठामा बारम्बार भेल्टिलेट गर्नुहोस् र वायुको गुणस्तर जाँच गर्नुहोस् र आर्द्रता उच्च भएको स्थानहरू छोड्नुहोस्।
COVID-19 र लू लाग्ने विरूद्ध लडौं!
<COVID-19 र लू लाग्न रोक्ने निम्न5आधारभूत उपायहरू> ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् र दैनिक क्रियाकलाप र व्यायामहरू पुन: सुरु गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा गरौं। यो गर्मीमा, ताप र आर्द्रता सहन कठिन हुन्छ तर हामी सबै सँगसँगै यसमा जीत हासिल गरौं।
ध्यान दिनुहोस्: यो लेखमा फेला परेको जानकारी वर्तमानको मे 24 को हो र ग्रेटर टोकियो क्षेत्र (टोकियो, साइटामा, चिबा र काना...